ဤရွေ့ကားလြယ္ကူမှုနှင့်အတူသင့်ရဲ့သွား Whiten | သွားလမ်းညွှန် Whiten ဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းစဉ်
သင်သည်သင်၏အံသွား whitening စဉ်းစားပေမယ့်အမြဲဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်. ကိုယ်ကျိုးကြည့်ခဲ့သခြောဘယ်မှာစလုပ်ဖို့မဟုတ်ကြကြလျှင်, သင်တို့အပေါ်မှာဖတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. သင် whitening အံသွားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုနားလည်သဘောပေါက်ကိုကူညီရန်ဤဆောင်းပါးအတွက်အကြံပြုချက်များအမျိုးမျိုးကိုတွေ့လိမ့်မည်, ဖြစ်နိုင်တဲ့ bast ရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်ရန်သင့်အားဖွင့်ထားခြင်း.
တစ်ဦး Whiten ကုသပြီးနောက်တိုက်ရိုက်အစားအစာများ staining ထွက်သည်ကိုကွညျ့ရှု. သူတို့ whitened ခဲ့ကြတခါသင်၏သွားပိုမိုလွယ်ကူစွာစွန်းထင်းရလိမ့်မည်. whitening ပြီးနောက်, အရောင်လည်းမှောင်မိုက်ကြောင်းကွာအစားအစာနှင့်သောက်နေရန်ကြိုးစား. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အံသွား၏အပေါ်ဆုံးအလွှာသို့အရသင့်ရဲ့အပြုံး၏အရောင်အဝါကိုလျော့ချနိုင်သောကြောင့်, အထူးသဖြင့်ကော်ဖီရှောင်ကြဉ်ပါ.
အကြံပြုချက်! whitening သဘာဝကအံသွားဘို့အော်ဂဲနစ်အုန်းသီးရေနံကိုသုံးပါ. နေ့စဉ်ဝန်းကျင်ဆယ်မိနစ်အဘို့သင့်ပါးစပ်ပတ်ပတ်လည်ရေနံ Swishing ထိရောက်စွာသင့်ရဲ့အံသွား Whiten နိုင်.
သံပုရာနှင့်လိမ္မော်သီးဗီတာမင် C ကိုတစ်အံ့သြဖွယ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းသင့်ရဲ့အံသွား Whiten နိုင်. သူတို့ကိုလည်းဖြူရဖို့သင့်ရဲ့အံသွားပေါ်ပွတ်သပ်နေတဲ့သံပုရာသို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်အခွံ၏အတွင်းပွတ်ကြိုးစားပါ. သင်ပင်ဒီနည်းလမ်းကိုတင်ပြလိမ့်မည်ဟုမြင်နိုင်ရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်ဖို့ peels မှဆား၏နည်းနည်းထည့်ပါနိုင်.
သင့်ရဲ့အံသွားတိုက်မှမုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါအသုံးချ. သဘာဝကျကျသင့်ရဲ့အံသွား Whiten ရန်, မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါအံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်ဖြစ်တယ်. မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါသုံ​​းတဲ့အခါညင်ညင်သာသာတိုက်တာသေချာပါစေ, အချို့လူများအတွက်သွားဖုံးပိုမိုဆိုးရွားနိုင်.
အကြံပြုချက်! တန်းတူအစိတ်အပိုင်းများတွင်ရောနှောနေတဲ့အိမ်လုပ် whitening သွားတိုက်ဆေးအသုံးပါအောက်ဆိုဒ်နှင့်မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါအောင်. အထိဆယ်မိနစ်အဘို့သင့်အံသွားတိုက်ဖို့ဒီအရောအနှောကိုသုံးပါ.
သငျသညျအဖြူအံသွားရဖို့အလိုငှါပြုသင့်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအရာကိုမှန်မှန်သွားသန့်ရှင်းရေးတက်ရောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်. တိုင်းခြောက်လသန့်စင်သင့်ရဲ့အံသွား Get နှင့်သင်၏လက်ရှိသန့်ရှင်းရေးအတှကျရုံးရှိနေစဉ်သင့်ရဲ့အနာဂတ်ရက်ချိန်း.
ရေအများကြီးသောက်ခြင်းအဖြူသင့်ရဲ့အံသွားကိုစောင့်ရှောက်ကူညီရမယ့်ကြီးမြတ် technique ကိုဖြစ်ပါတယ်. လုံလောက်သောရေသောက်သုံးသင့်ရဲ့ခံတွင်းကိုသုတ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်, သင့်ရဲ့အံသွားပေါ်တက်တည်ဆောက်ခြင်းမှအစွန်းအထင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်. ရေကိုမသောက်ရန်အကောင်းတစ်ဦးအလေ့အကျင့်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့်အစားအစာများစဉ်နှင့်အပြီး.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့အံသွားလည်းဖြူမကွညျ့ခငျြ? ပန်းသီးတစ်လုံးစားပါ. ပန်းသီးကအရမ်းပွန်းစားခြင်းနှင့်သူတို့သည်သင်တို့အံသွား၏ကြွေဖို့ဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမရှိဘဲလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့အံသွားသန့်ရှင်းရေးလိမ့်မည်.
ကျန်းမာသောအစားအစာများကိုစားပါ; အသီးအပွသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်တူကုန်ကြမ်းအစားအစာများကိုသငျသညျလည်းဖြူအံသွားမြင်ချင်လျှင်. သင့်ရဲ့အံသွားကျန်းမာတဲ့ဆက်လက်တည်ရှိကိုကူညီလာတဲ့အခါမှာအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှထိုကဲ့သို့သောအစားအစာများကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားပါ. သင်သည်သင်၏အပြုံးတောက်တောက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုလျှင်သင်အလွန်အကျွံ snacking လည်းရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်.
သင်သည်မည်သည့်မှောင်မိုက်အရည်ကိုသောက်သုံးကြသောအခါတစ်ဦးကောက်ရိုးကိုသုံးပါ. တစ်ဦးကကောက်ရိုးကအံသွားကိုရှုတ်ချရန်သင့်ဖျော်ယမကာကြာအချိန်ပမာဏကိုလျော့ကျလာခြင်းဖြင့်အံသွား whitens. ဖြောင့်လည်ချောင်းဆင်းနှင့်ကြွေနှင့်အတူအနည်းဆုံးအဆက်အသွယ်ရှိခြင်းအားဖြင့်, လျော့နည်းအစွန်းအထင်းများနှင့်အရောင်ပြောင်းရှိပါတယ်.
အကြံပြုချက်! သငျသညျလုပ်ထုံးလုပ်နည်း whitening တစ်ဦးအံသွားခံရပြီးနောက်, သငျသညျကိုသာအနည်းဆုံးသုံးလေးမှနေ့ရက်ကာလအဘို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရည်ကိုသောက်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ဤသူတို့သည်အစောပိုင်းကာလများတွင်, မှောင်မိုက်အဖျော်ယမကာမှအသီးအပွမှအရောင်အဆင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုသင့်ရဲ့အံသွားသို့စုပ်ယူရနိုင်.
သင်၏နှုတ်၌သရဖူရှိပါတယ် အကယ်., သင့်ရဲ့အံသွား Whiten စေခြင်းငှါ; သို့သော်, သင့်ရဲ့သရဖူတူညီတဲ့အရောင်ကျန်ရှိခဲ့လိမ့်မည်.
အမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှုကိုသင့်ရဲ့ထိပ်တန်းအံသွား-whitening ဦးစားပေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ASAP သင့်ရဲ့သွားဆရာဝန်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုရ. whitening အံသွားသင်တို့အဘို့အပေးနိုငျကွောငျးအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာအနုတ်အကျိုးဆက်များရှိသည်နိုင်ပေမဲ့. သင်သည်သင်၏အံသွား Whiten ဖို့ကြိုးစားခင်ကသင့်ရဲ့သွားဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန်ပညာရှိဖြစ်၏, သူတို့ကနျြးမာဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်, နှင့်အစွန်းအထင်းပြဿနာတွေအခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေခံကြသည်မဟုတ်. ကဘေးကင်းလုံခြုံ Play; သင့်ရဲ့သွားဆရာရဲ့အကူအညီနဲ့သင့်ရဲ့အံသွား whitening များအတွက်ကျန်းမာထိရောက်သောအစီအစဉ်ကို set up.
အကြံပြုချက်! သင်ဆေးလိပ်သောက်နေလျှင်, သင့်ရဲ့အံသွား whitening အဘို့သင့်အာဏာအရှိဆုံး tool ကိုအလေ့အကျင့်ကိုတက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျဆေးလိပ်သောက်တည်လျှင်၎င်းသည်ထုတ်ကုန် whitening အံသွားပေါ်ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့ကြိုးဖြစ်ပါသည်.
သင့်ရဲ့အံသွားနိန်သူတို့ကိုကာကွယ်ကူညီပေးသည်. ကောင်းတစ်ဦးသွားတိုက်ဆေးရွေးပါ, အခေါင်းပေါက်တိုက်နှင့် Whiten အံသွားကူညီပေးသည်တ. အမျိုးမျိုးသောအမှတ်တံဆိပ်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသုတေသနပြုသင့်အံသွားဘို့အလုပ်လုပ်တယောက်ကိုကူညီရှာဖွေနိုင်ပါတယ်.
အကြံပြုချက်! သငျသညျအနာဂတျတှငျဝါယာကြိုးမသန်စွမ်းပဲရတဲ့အပေါ်အစီအစဉ်ရှိပါက, တဦးတည်းထောက်ခံချက်ဖြစ်စဉ်ကစတင်ခဲ့သည်ခင်မှာသင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖြစ်ပါတယ်. သင်ဤအကြံဉာဏ်ကိုယူလိုလျှင်, သငျသညျကိုသာ straighter မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအံသွားနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်မည်, ဒါပေမယ့်လည်းဖြူအဖြစ်ကောင်းစွာ.
မကြာခဏရေသောက်လည်းဖြူအံသွားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်. ရေနှင့်သင်၏အံသွားလက်မဆေးလည်းသွားအရောင်ပြောင်းစေနိုငျသောအမှုန်များကိုဆေးကြောနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အစားအစာနှင့်အစားအစာကာလအတွင်းရေသောက်နေတဲ့အလေ့အကျင့်လုပ်ပါ.
mouthwash သုံးပြီး Quit. သင်၏အသက်တာထဲက mouthwash ဖြတ်တောက်ခြင်းသငျသညျအဖြူအံသွားထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အတူရှိခြင်းကြသည်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်စေခြင်းငှါ,. Mouthwash အများအပြားအန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းများဖွင့်ထား. ဤအဓာတုပစ္စည်းအချို့သည်သင့်ရဲ့အံသွားကိုရှုတ်ချခြင်းနှင့်အရောင်ပြောင်းနိုင်.
အကြံပြုချက်! အံသွားခဲအဖြူဆက်လက်တည်ရှိကိုကူညီတစ်ခုမှာလမ်းအများအပြားအချိုရည်ကိုမသောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်. အချိုရည်အံသွား discolors နှင့်အစွန်းအထင်းကအဖြစ်လည်းမဆံ့.
အစွန်အဖျား whitening အကောင်းဆုံးအံသွား walnut သစ်ပင်တပင်အခေါက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. အသွားနှင့်ကိုက်ခဲအခေါက်၏ဤအမျိုးအစားလျှောက်ထားတဲ့အကြီးအ whitening အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်, ထိုသို့လည်းနက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေးကိုထောက်ပံ့ပေး. သင်သည်သင်၏ပါးစပ်ထွက်သုတ်ခြင်းနှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အခေါက်ကို အသုံးပြု. ပြီးနောက်သင့်ရဲ့အံသွားတိုက်သင့်တယ်.
အကြံပြုချက်! ဖုတ်ဆိုဒါပါအောက်ဆိုဒ်နှင့်ရောသောအခါလည်းသင့်ရဲ့အံသွား whitens တဲ့ညင်ညင်သာသာပွန်းစားသွားတိုက်ဆေးအဖြစ်သုံးနိုင်တယ်. ထိုအန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းများမပါဘဲတောက်ပအံသွားအဘို့ဤအရောအနှောကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့အံသွားတိုက်.
တစ်ဦးအကြပ်အတည်းနှင့်အတူအစားအစာများကိုစားခြင်းဟာအလွန်ထိရောက်တဲ့ဖြစ်နိုင်. အစားအစာများ, မုန္လာဥနီတုတ်နှင့်ပန်းသီးနဲ့တူ, ဖြူကိုသင့်အံသွားကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကူညီပေးပါ. သငျသညျဝါးနေစဉ် crunchy ဖြစ်ကြောင်းအစားအစာများကိုသင့်အံသွားသန့်ရှင်းရေးနိုင်ပါတယ်. သူတို့ရဲ့တပြင်လုံးကိုခွအေနအေမှာသူတို့ကိုလောင်ဖို့ဂရုစိုက်ပါ, အစားသူတို့ကိုသွေးတွေစီးထွက်လာသို့မဟုတ် dicing ထက်.
အကြံပြုချက်! ပိုပြီးနို့ထွက်အစားအစာများကိုစားပါ. ဒိန်ခဲကဲ့သို့အမှုအရာ, နို့နှင့်ဒိန်ချဉ်အားကြီးသောအထောက်အကူပြုသောသူတို့အားအတွက်အာဟာရများ, ကျန်းမာတဲ့-ရှာဖွေနေအံသွား.
သင်သည်မည်သည့် Whiten စနစ်များကိုသာသဘာဝကအံသွားပေါ်အလုပ်လုပ်သိသင့်. သငျသညျထိုကဲ့သို့သော veneers အဖြစ်ပါးစပ်တွင်းအလုပ်ရှိပါက, veneers, သင့်ရဲ့ခံတွင်း၏ရှေ့မှောက်၌သရဖူသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်, သူတို့အရောင်မပြောင်းပါလိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့သဘာဝကအံသွား whitening သွားအလုပ်အလွန်လက်မကဲ့သို့တက်ကပ်စေခြင်းငှါ.
သင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့ရေငန်အရောအနှောကိုစမ်းကြည့်ပါ. တစ်ခွက်ကိုရေနှင့်ဝက်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းကျောက်ကိုဆားရောထွေးနှင့်ကအကြောင်းငါးမိနစ်မျှထိုင်ကြ. ထိုဆားကိုရေနှင့် Gargle, အစား mouthwash ၏. ဒီ technique ကိုသင်၏နှုတ်၌အခေါင်းပေါက်၏ပမာဏကိုကန့်သတ်ထားရန်ဘက်တီးရီးယားလျှော့ချကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
အကြံပြုချက်! အမျိုးမျိုးသောအသီးအပွသဘာဝကျကျသင့်ရဲ့အံသွားလည်းဖြူအောင်လုံခြုံနှင့်ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းဖြင့်သင်တို့ကိုပေး. ဥပမာ, စတော်ဘယ်ရီအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်နိုင်.
ဗူးခွံစနစ်တကျ fit ပါဘူးဘယ်အချိန်မှာ, ထိုဓာတုပစ္စည်းများအလွယ်တကူသွားဖုံးဧရိယာကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းစေနိုင်ပါတယ်.
တစ်ဦးကံဇာတာကုန်ကျပါဘူးကြောင်းကိုသင်၏အံသွား Whiten နှင့်တောက်ပစေတယ်ဖို့အများကြီးလုံခြုံပြီးလွယ်ကူသောလမ်းရှိပါတယ်. တစ်ဦးကအလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းမုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ၏အသုံးပြုမှုကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကိုဝယ်နိုင်သည့်မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါဆံ့ကြောင်းသွားတိုက်ဆေးရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်ကိုယ့်အိမ်မှာသင့်ရဲ့ဗီရိုထဲမှာပစ္စည်းပစ္စယကိုသုံး.
အကြံပြုချက်! ဆေးပြင်းလိပ်သို့မဟုတ်စီးကရက်ဆေးလိပ်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူမနေပါနဲ့. ဤရွေ့ကားသွားအရောင်ပြောင်းစေမည်.
whitening သွားတိုက်ဆေးအခြား whitening နည်းလမ်းများ၏တန်ခိုးကင်းမဲ့နေချိန်တွင်, သူတို့တားဆီးနိုင်သည်သို့မဟုတ်အသစ်အစွန်းအထင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရ. ဤရွေ့ကားသွားတိုက်ဆေးကိုကြွေကိုပျက်စီးစေမည်မဟုတ်ကြောင်း silica ပွန်းစားခြင်းကိုအသုံး.
သင်သည်သင်၏အံသွားတိုက်ကြသောအခါအချို့ဆားသုံးပြီးကြိုးစားပါ. တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့, သင့်ရဲ့အံသွား whitening သေးထိရောက်သောလှည့်ကွက်ဆားနှင့်အတူနိန်သည်. သငျသညျနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အသီးအသီး Brush ပြီးနောက်သင်၏နှုတ်သုတ်ရမယ်. ဒါကြောင့်ပွန်းစားသောကြောင့်,, ဆားနှင့်အတူနိန်နှင့်အတူသိမ်းသွားခြင်းကိုရကြဘူး.
အကြံပြုချက်! အစာစားပြီးပြီး, သင့်ရဲ့အပြုံးကာကွယ်ပေးရန် Orbit တူ whitening သွားဖုံးဝါး. သွားဖုံး၏အချို့အမျိုးအစားများကိုသင့်အံသွား Whiten မှဖော်စပ်ထားပါသည်.
သငျသညျတိုက်သင့်ပါ, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သွားဖုံးနှိပ်နယ်လျှောက်ထား. သင့်ရဲ့အပြုံးအဖြူအဲ့ဒီအချိန်မှာသေချာစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရိုးရိုးစားပြီးနောက်တိုက်နှင့် FLOSS ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ဆောနှင့်မည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေတော်ရှေ့မှာဒါဟာသင်အစာကျန်ကြွင်းနှင့် plaque ၏ဖယ်ရှားပစ်ရခွင့်ပြု.
သင်သည်သင်၏အံသွားတိုက်တဲ့အခါငှက်ပျောခွံသုံးနိုင်တယ်. ဒါဟာလူအများစုအကျင့်ကိုကျင့်ကျိန်ဆိုတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကိုနိန်ရှေ့တော်၌ထိုငှက်ပျောခွံနှင့်သင်၏အံသွားကျော်ပွတ်. ထိုအခါသင်အမြဲကျင့်သောတူညီသောလမ်းအံသွားတိုက်. သင်သည်သင်၏အံသွားအတွက်ချက်ချင်းရလဒ်တွေကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်.
အဝါရောင်အံသွားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသောက်ကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦး၏တစ်ဦးကိုအလွယ်တကူသိသာလက္ခဏာသက်သေဖြစ်. ဒါဟာသင်ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါတောက်ပသောအဖြူရောင်စောင့်ရှောက်ရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်. သင်ဆေးလိပ်သောက်ရမယ်လိုလျှင်, ဒါကြောင့်သင်ပိုမိုကျန်းမာသန်ဖြစ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ရှာဖွေနေအံသွားရှိသည်နိုင်အနည်းငယ်လျော့နည်းဆေးလိပ်သောက်ဖို့ကြိုးစား.
သင့်ရဲ့အံသွား whitening သင်၏အသက်တာ၏စာသားပိုကောင်းအရည်အသွေးအားကွီးသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဖြူအံသွားမသာသင်အများကြီးပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုစေသည်; ဒါကြောင့်သင်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်စေရန်ကူညီပေးသည်. သင်ထွက်ရဖို့ပိုပြီးဆန္ဒရှိနေကြသည်ကွောငျးတှေ့နှင့်အခြားလူတို့နှင့်အတူအမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မည်. သင့်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဤအကြံပြုချက်များ Apply, နှင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ afforadably သူတို့ကိုအောင်မြင်ရန်.
categories: Whiten သွားဖို့အခြေခံပြီးမူလစာမျက်နှာ Tags:: အလှတရားအပြုံး, သင့်ရဲ့အပြုံး၏ရောင်ခြည်, သင့်ရဲ့အံသွား Whiten, သင်၏သွားလွယ်ကူ Whiten, သင့်ရဲ့အံသွား whitening